၃ ဂဏန်းသမားများအကြောင်း – Trend.com.mm
Posted on May 11, 2020 by adminK
မည်သည့်လတွင်မဆို ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရက်မွေးသောသူများသည် ၃ ဂဏန်းသမားများ ဖြစ်ကြသည်။
၁။ မင်းဟာ နှလုံးသားမာကျောပြီး တကိုယ်ကောင်းဆန်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာတရားကို ကိုင်းရှိုင်းတတ်သူတစ်ဦးပါ။
၂။ မင်းဟာ တိုးတက်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့သူတစ်ဦးပါ။ မိသားစုပြဿနာတွေကို
လျှော့ကျဖို့လိုလားပေမယ့်..ပြဿနာတိုင်းက မင်းဆီကနေပဲ မြစ်ဖျားခံတတ်တာများပါတယ်။
၃။ မင်းဟာ သြဇာအာဏာကြီးမားပြီး.. နှစ်လိုဖွယ်မျက်နှာထားကို ပိုင်ဆိုင်သူ
တစ်ဦးပါ။ ဒါကြောင့်.. ဘယ်နေရာကိုသွားသွား.. မင်းအလိုရှိတာတွေကို အဆင်သင့်
၄။ မင်းဘဝမှာ မွေးဖွားလာကတည်းက တခုခုကို ရဖို့အတွက် အမြဲတမ်း
ပြင်းထန်စွာကြိုးစွာနေရတတ်တယ်။ မကြိုးစားဘဲနဲ့ ရလာတာဆိုတာ အလွန်ပဲ ရှားပါးလှပါတယ်။
၅။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ.. မင်းဟာ ကိုယ့်ထက်ငယ်ရွယ်သူတွေကို ဆိုဆုံးမတတ်တယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့.. ကြီးတဲ့သူကို ငယ်သူက ရိုသေမှုပြသရတာကို မင်းဟာ
၆။ မင်းဟာ စံပြနေလေ့ရှိပါတယ်.. ဒါပေမယ့်..ယေဘုယျအားဖြင့်တော့.. မင်းဟာ
၇။ မင်းနဲ့ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာ..ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တခုပါ..မင်းဟာ စိတ်ဓါတ်မာတဲ့
၈။ ဒါပေမယ့်လည်း.. တစုံတယောက်ရဲ့အပြုအမှုကို မင်းသဘောကျသွားပြီဆိုလည်း..
မင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ အရမ်းကို ခိုင်မာနေတက်ပါတယ်။
၉။ မင်းဟာ အမြဲလိုလို..သူတပါးဆီက လေးစားမှုကို ရရှိနေတတ်သူ တစ်ဦးပါ။
၁၀။ မင်းဘဝမှာ ရန်သူတွေ…ပြဿနာတွေ အများကြီးရှိမယ်လို့ ထင်ရပေမယ့်.. အဲဒါတွေက
၁၁။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့.. မင်းက ပါရမီရှင်တယောက်လိုပါပဲ..
၁၂။ မင်းဟာ ပိုက်ဆံကို အနည်းငယ်ပို မက်မောတဲ့အတွက်..
သူရဲ့စေခိုင်းမှုအောက်မှာ..အဆုံးမရှိ ကြိုးစားခြင်းတွေ .ရုန်းကန်ခြင်းတွေနဲ့…မင်းဟာ နပန်းလုံးနေရတတ်တယ်။
၁၃။ မင်းဟာ အမျိုးသားတစ်ဦးဆိုရင်တော့..အားလုံးဟာ ပြီပြည့်စုံနေပါပြီ.. မိသားစုကို
စောင့်ရှောက်တယ်..သူငယ်ချင်းတွေကို ကူညီတယ်.. ဘဝကို ပေးကမ်းမှုတွေ..ကြင်နာတွေနဲ့
အချိန်ကုန်လွန်စေတဲ့သူပေါ့ (ဒါပေမယ့် ၂၁ ရက် မွေးသူမပါပါ)… ပြီးတော့ မင်းဟာ
၁၄။ တကယ်လို့..မင်းဟာ အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်း.. အကျင့်စရိုက်ကောင်းတွေ..
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုတွေ.. အလုပ်ကြိုစားမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေမှာပါ။
၁၅။ မင်းဟာ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသူ.. တီထွင်သူ..ရည်မှန်းချက်ကြီးသူ..အာရုံစူးစိုက်လုပ်တက်သူ
ပြီးတော့. ကမ္ဘာကို အလှ..မျှော်လင့်ချက်..ပျော်ရွှင်မှုတွေကို သယ်ဆောင်လာသူ
၁၆။ မင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်ကတော့… 6, 9. သင့်တော်တဲ့အဖော်မွန်ကတော့..1,3, 5။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ၃ ဂဏန်းသမားတွေဆိုတာ…
မျက်နှာပွင့်၍ လူချစ်လူခင် ပေါများမည်။ ချစ်သူရည်းစားတစ်ဦးမကရှိမည်။ သူတစ်ပါး အပေါ် အနိုင်ယူ ဗိုလ်ကျရမှ ကျေနပ်သူများဖြစ်ပေရာ အချစ်စိတ်နှင့် ခံယူမူမှာ ဆိုးနွဲ့ သမျှကို နားလည် ခွင့်လွှတ်သောသူ၊ အနိုင်ယူ ရမည့်သူကို ရွေးချယ်တတ်သည်။ နှလုံးသားကိုဦးစားပေး၍ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ မှားယွင်းသလို ပြန်ခံစားတတ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကား အရင်ဆုံး ချစ်သူအပေါ် စိတ်ပြန်လည်သွားမည်။ တစ်ဦးကို အသည်းနှလုံး ပုံပေး၍ ချစ်တတ်သလို တစ်ပြိုင်တည်း အခြားသူ တစ်ဦးအပေါ်ချစ်နိုင်စွမ်း ရှိသည်။ နှလုံးသားအပေါ် ဦးစားပေး လွန်းသူဖြစ်သည်။
မညျသညျ့လတှငျမဆို ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရကျမှေးသောသူမြားသညျ ၃ ဂဏနျးသမားမြား ဖွဈကွသညျ။
၁။ မငျးဟာ နှလုံးသားမာကြောပွီး တကိုယျကောငျးဆနျတတျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာသာတရားကို ကိုငျးရှိုငျးတတျသူတဈဦးပါ။
၂။ မငျးဟာ တိုးတကျမှုကို မွတျနိုးတဲ့သူတဈဦးပါ။ မိသားစုပွဿနာတှကေို
လြှော့ကဖြို့လိုလားပမေယျ့..ပွဿနာတိုငျးက မငျးဆီကနပေဲ မွဈဖြားခံတတျတာမြားပါတယျ။
၃။ မငျးဟာ သွဇာအာဏာကွီးမားပွီး.. နှဈလိုဖှယျမကျြနှာထားကို ပိုငျဆိုငျသူ
တဈဦးပါ။ ဒါကွောငျ့.. ဘယျနရောကိုသှားသှား.. မငျးအလိုရှိတာတှကေို အဆငျသငျ့
၄။ မငျးဘဝမှာ မှေးဖှားလာကတညျးက တခုခုကို ရဖို့အတှကျ အမွဲတမျး
ပွငျးထနျစှာကွိုးစှာနရေတတျတယျ။ မကွိုးစားဘဲနဲ့ ရလာတာဆိုတာ အလှနျပဲ ရှားပါးလှပါတယျ။
၅။ အရှယျရောကျလာတဲ့အခါမှာ.. မငျးဟာ ကိုယျ့ထကျငယျရှယျသူတှကေို ဆိုဆုံးမတတျတယျ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့.. ကွီးတဲ့သူကို ငယျသူက ရိုသမှေုပွသရတာကို မငျးဟာ
၆။ မငျးဟာ စံပွနလေရှေိ့ပါတယျ.. ဒါပမေယျ့..ယဘေုယအြားဖွငျ့တော့.. မငျးဟာ
၇။ မငျးနဲ့ဆကျဆံဖို့ဆိုတာ..ခကျခဲတဲ့အလုပျတခုပါ..မငျးဟာ စိတျဓါတျမာတဲ့
၈။ ဒါပမေယျ့လညျး.. တစုံတယောကျရဲ့အပွုအမှုကို မငျးသဘောကသြှားပွီဆိုလညျး..
မငျးတို့နှဈယောကျရဲ့ဆကျဆံရေးဟာ အရမျးကို ခိုငျမာနတေကျပါတယျ။
၉။ မငျးဟာ အမွဲလိုလို..သူတပါးဆီက လေးစားမှုကို ရရှိနတေတျသူ တဈဦးပါ။
၁၀။ မငျးဘဝမှာ ရနျသူတှေ…ပွဿနာတှေ အမြားကွီးရှိမယျလို့ ထငျရပမေယျ့.. အဲဒါတှကေ
၁၁။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့.. မငျးက ပါရမီရှငျတယောကျလိုပါပဲ..
၁၂။ မငျးဟာ ပိုကျဆံကို အနညျးငယျပို မကျမောတဲ့အတှကျ..
သူရဲ့စခေိုငျးမှုအောကျမှာ..အဆုံးမရှိ ကွိုးစားခွငျးတှေ .ရုနျးကနျခွငျးတှနေဲ့…မငျးဟာ နပနျးလုံးနရေတတျတယျ။
၁၃။ မငျးဟာ အမြိုးသားတဈဦးဆိုရငျတော့..အားလုံးဟာ ပွီပွညျ့စုံနပေါပွီ.. မိသားစုကို
စောငျ့ရှောကျတယျ..သူငယျခငျြးတှကေို ကူညီတယျ.. ဘဝကို ပေးကမျးမှုတှေ..ကွငျနာတှနေဲ့
အခြိနျကုနျလှနျစတေဲ့သူပေါ့ (ဒါပမေယျ့ ၂၁ ရကျ မှေးသူမပါပါ)… ပွီးတော့ မငျးဟာ
၁၄။ တကယျလို့..မငျးဟာ အမြိုးသမီးဆိုရငျလညျး.. အကငျြ့စရိုကျကောငျးတှေ..
ယဉျကြေးသိမျမှမှေု့တှေ.. အလုပျကွိုစားမှုတှနေဲ့ ပွညျ့နမှောပါ။
၁၅။ မငျးဟာ လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးသူ.. တီထှငျသူ..ရညျမှနျးခကျြကွီးသူ..အာရုံစူးစိုကျလုပျတကျသူ
ပွီးတော့. ကမ်ဘာကို အလှ..မြှျောလငျ့ခကျြ..ပြျောရှငျမှုတှကေို သယျဆောငျလာသူ
၁၆။ မငျးရဲ့ အကောငျးဆုံး အဖျောမှနျကတော့… 6, 9. သငျ့တျောတဲ့အဖျောမှနျကတော့..1,3, 5။
နောကျဆုံးအနနေဲ့ ၃ ဂဏနျးသမားတှဆေိုတာ…
မကျြနှာပှငျ့၍ လူခဈြလူခငျ ပေါမြားမညျ။ ခဈြသူရညျးစားတဈဦးမကရှိမညျ။ သူတဈပါး အပျေါ အနိုငျယူ ဗိုလျကရြမှ ကနြေပျသူမြားဖွဈပရော အခဈြစိတျနှငျ့ ခံယူမူမှာ ဆိုးနှဲ့ သမြှကို နားလညျ ခှငျ့လှတျသောသူ၊ အနိုငျယူ ရမညျ့သူကို ရှေးခယျြတတျသညျ။ နှလုံးသားကိုဦးစားပေး၍ ဆုံးဖွတျပွီးမှ မှားယှငျးသလို ပွနျခံစားတတျသညျ။ နောကျဆုံးတှငျကား အရငျဆုံး ခဈြသူအပျေါ စိတျပွနျလညျသှားမညျ။ တဈဦးကို အသညျးနှလုံး ပုံပေး၍ ခဈြတတျသလို တဈပွိုငျတညျး အခွားသူ တဈဦးအပျေါခဈြနိုငျစှမျး ရှိသညျ။ နှလုံးသားအပျေါ ဦးစားပေး လှနျးသူဖွဈသညျ။
အငယ်ဆုံးတို့ရဲ့ တမူထူးတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ